Nubia Red Magic 6 ga-abata na ume ume karịa 144 Hz | Gam akporosis
Naanị ihe karịrị otu izu, Nubia ga-ewepụta ekwentị ọhụrụ. Anyị ekwuolarị banyere nke a n'oge ahụ, na-ekpughe na ọ bụ Machị 4, ụbọchị mwepụta nke ọnụ ya na-etu ọnụ, nke ga-eti ahịa dị ka Ime Anwansi Red 6.
Dị ka ị nwere ike ịtụ anya, smartphone ahụ ga-abụ arụmọrụ dị elu, ma nye akụkọ ihe mere eme nke ZTE sub-brand, ọ ga-egosipụta atụmatụ na ọrụ egwuregwu pụrụ iche. Nke a gụnyere ọnụego ume ọhụrụ dị elu, nke na nke a, ihe ijuanya, gafere 144 Hz, ihe na-emebeghị na ahịa mkpanaka.
Kedu ihe anyị ga-atụ anya n'aka ọhụrụ Nubia Red Magic 6?
N'ikwu okwu banyere smartphone nke klaasị na nkọwapụta ọkwa kachasị elu, anyị enweghị ike ịtụ anya obere. E nwere ọtụtụ nkọwa na e leaked banyere nke a na ngwaọrụ na-adịbeghị anya izu. Ya mere, anyị agaghị enweta nnukwu ihe ịtụnanya na Machị 4, ma obere ihe Ni Fei, onye isi ala Nubia, kpughere.
Dabere na nke kachasị ọhụụ gosipụtara site na Weibo, netwọkụ mmekọrịta microblogging nke China, Nubia Red Magic 6 ga-enwe ihuenyo nwere ume na-enye ume karịa 144 Hz, dị ka innuendo. Ka anyị buru n'uche na ọnụego ume 144 Hz bụ nke kachasị anyị nwere ike ịchọta taa na ihuenyo nke ama, na ole na ole, nke bụ ụdị egwuregwu egwuregwu.
Amabeghị ugboro ole melite ihuenyo nke ama a ga - enye, mana a na-eche na nke a nwere ike ịbụ 165 Hz. Nke a ga-abụ ihe dị ezigbo mma maka ndị ọrụ ahụ na-enye nnukwu mkpa na mmasị na mmiri nke panel nke ekwentị, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ha raara onwe ha nye na-egwu ya. Otú ọ dị, a ka nwere egwuregwu ole na ole na-akwado ọnụ ọgụgụ ume ọhụrụ dị elu. A ga-ahụ ihe ọmụmụ ahụ, karịa ihe ọ bụla, na arụmọrụ na iji ekwentị mkpanaaka.
Ni Fei na-egosi na Red Magic 6 ga-enwe ihuenyo dị elu karịa 144 Hz
Ọnwa ole na ole gara aga ọ ga-ekwe omume ịmeghe ọnụọgụ ume 160Hz na ekwentị ROG 3, Ekwentị mkpanaka Asus. Oge mmelite a kachasị elu na mkpanaka egwuregwu, mana ọ bara uru iburu n'uche na iji nweta ya, ụfọdụ nhazi ahaghị ọrụ ga-arụ, ebe ọ bụ na ọnụahịa ahụ nwere naanị 144 Hz ka ọnụọgụ ume kachasị elu nke ndị nrụpụta gosipụtara; Ọ bụghị ihe amamihe dị na ya ime ya. Ọ bụ ezie na ọ nwere ike, ọ dị ka na Machị 4 anyị ga-anata mbido mbụ nwere ihuenyo karịrị 144 Hz.
Akụkụ ndị ọzọ na nkọwapụta ndị a nụworo banyere Nubia Red Magic 6 gụnyere Qualcomm kachasị arụ ọrụ chipset, nke na-abụghị onye ọzọ karịa ama ama Snapdragon 888, ikpo okwu mkpanaka nke nwere okpukpu asatọ ma nwee ike iru elekere elekere kacha elu nke 2.84 GHz. N'aka nke ya, Snapdragon 1 bụ nke anyị chọtara maka SoC a.
N'aka nke ọzọ, a na-ekwu na mkpanaka ahụ ga-abịa na Ram nke 8/12 GB na 128/256 GB nke ebe nchekwa dị n'ime. Anyị anaghị echere ụdị dị iche na 16 GB nke RAM, mana ekwupụtakwala ya. Na mgbakwunye na nke a, batrị ahụ ga-abụ ikike 5.000 mAh na ga-enwe teknụzụ na-ebu ọkụ ngwa ngwa 66W, dị ka akwụkwọ mgbasa ozi kachasị ọhụrụ nke ndị na-emepụta China si bipụta ụbọchị ole na ole gara aga.
Igwe anwansi nke Red Magic 6, na mgbakwunye na ịbụ ihe karịrị 144 Hz, ga-abụ teknụzụ Super AMOLED ma nwee atụmatụ nke 6.5 sentimita asatọ. Mkpebi nke a ga-abụ FullHD + nke 2.400 x 1.080 pikselụ, yana usoro ngosipụta ngosipụta ahụ bụ 20: 9. N'ebe a, anyị agaghị ahụ oghere na ihuenyo ahụ, ma ọ dịkarịrị obere ọkwa, mana, kama nke ahụ, ngosipụta ihuenyo zuru oke na bezel ọkụ na akpọrọ elu na ala ala; mbụ, iji dozie ihe mmetụta selfie maka foto n'ihu na ndị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nubia Red Magic 6 ga-abata na ihuenyo nwere ọnụego ume ọhụrụ karịa 144 Hz